Baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ansixiyay miisaaniyadda 2019 - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBaarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ansixiyay miisaaniyadda 2019
December 30, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Baarlamaanka DFS oo u gacantaagaya ansixinta miisaaniyada 2019. [Isha Sawirka: MOF]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah ansixiyay miisaaniyadda 2019-ka.
Kadib labo maalmood oo ka doodis ah 174 xildhibaan oo kulanka soo xaadiray ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyay miisaaniyada.
Miisaaniyada la ansixiyay ayaa dhan $344,192,685 milyan waxaa jirar koror miisaaniyadeed ayaa jira marka loo barbardhigo miisaaniyada sanadka dhammaanaya ee 2018 oo ahayd $274.6 Milyan.
Wasiirka Maaliyada Cabdiraxmaan Beyle Ducaale ayaa uga mahadceshay baarlamaanka ansixintooda.
Dabayaaqadii bishii Oktoobar, golaha wasiiradda Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa meelmariyay miisaaniyada sanadka 2019.
Nairobi-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyata ayaa guddoomay dhambaal uga yimid madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo uu ku codsanayo in uu kas oo qaybgalo munaasabada caleemosaarkiisa, taasoo ka dhacaysa caasimada Soomaaliya [...]